Recherche clinique - Quanta Médical
Fahalalana sy fifehezankasa
Ny fomba fiasa ampiharinay amin’ny fikarohana ara-pahasalamana dia miavaka noho ny fifampitohizana hentitra tsy anavahana ireo fahalalana manokana hifarimbonan’ny KOLs iraisam-pirenena mba hanaovana safidy klinika arifomba hentitra, mandala ny fiarovana fenitra (DSMB).
Hatrany am-boalohany ka hatramin’ny famoahana (fampielezana) vokatrasa, ny fizotran’ny tetikasanareo dia tombana fitanisana ireo loza sy fahasarotana aloha, amin’ny alàlan’ny fampisehoana tondroisa kalitao sy fahombiazana.
Ny teknika novolavolain’ny ara-maso ifotony (fandrakofana ny Firenena Eropeana) dia nohamafisin’ny fivoaran’ny “fampiharana” application QUANTA View (vokatra-anTrano eCRF) ary fitsirihana voatily lasibatra (Risk Based Monitoring).
Ny zavatra efa nosedrainay (traikefa) tamin’ireo fikarohana klinika notontosaina, dia mandrakotra karazana valam-Pamakafakana ireo trangaPahasalamana maro samihafa.
Ny ara-maso dia manome antoka ny fitandremana hentitra @ireo angon-andrakitra klinika manaja ny SOP sy ny fenitra ISO ary ny fepetra takian’ny lalàna frantsay sy eoropeana.
Ny herinay: hampivelatra ny fahaiza-manao sy ny fifehazanasan’ny ekipanay, mpitantana angon-andrakitra (data managers) hisorohana izay tokony fahasarotan’ny fikarohana klinika.
Ny fifehezana ny fizotran’ny fitantanana angona (data management) ho fanarahana ny tolo-kevitra iraisam-pirenena (EMA, ICH, FDA).
Ny fototra faha-izianay: miantoka ny fahamarinan’ny angona, ny fahatokisana azy ireo sy ny firafitry izay vokatra tena mahomby, hahazoana manolotra an’ireo famakafakana – fandalinana – fandinihana – fanadihadiana, izany no atao mba hatratrarana ireo tanjona.
Ny herinay: dia ny fifarimbonantsika manantontosa ny tetikasanareo @ alalan’ny torolalana ifampizarantsika Antontanisa hentitra sy azo antoka
Ny fifehezanay ny famolavolana sy ny fandrindrana taridia, @ fanajariana sy fikajiana, fandrafetana fandalinana statistika Antontanisa, sy fanoratana tatitra momba ny famakafakana voarakitry ny boky izay tontosan’ny komity mpiara-mamaky.
Ny tanjakay :
Manohana anareo amin’ny fanatanterahana ny tetikasanareo ary manolotra vahaolana mifanaraka amin’ny filànareo
Mampiroborobo ny vokatra amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa akaiky miaraka amin’ireo manam-pahaizana matihanina ato aminay (mpampianatra, mpitantana angon-drakitra, mpandinika ny fitomboan’ny zava-manan’aina).
Ny fahaiza-manao : mampivoatra ny rindram-baiko miaraka amin’ny fiantohana ny kalitao sy ny fiarovana ny fenitra ISO 9001 sy 27001 ary miantoka ny fampiantranoana, fikojakojana, ny fitaovana ary fivoarana tsy tapaka izay manaja ny fitakiana ara-dalàna.
Fantarina bebe kokoa...
Ny traikefa azo tamin’ny fandalinana « pharma » dia ahafahantsika mitily ampamendrehana amin’ny fomba hentitra ny fivoaran’ny fitakianan’ireo fitaovana fitsaboana marobe ireo, toy ny famahanana ireo tatitra momba ny tombana ara-pahasalamana, ohatra, izany dia amin’ny alàlan’ny fandraisantsoratra ireo angon-kevitra klinika isantsokajiny.
Ny traikefa nolovaintsika hatry ny ela tao amin’ny sehatry ny FitaovamPitsaboana (Medical Devices MD) dia tena misy fahasamihafana tokoa, ary mamela antsika handinika ny drafimpanorom-pitsaboana mahomby arakarany indrindra ny :
FP novolena mavitrika, tsy misy marika CE,
FP misy marika CE, raha fampiasana vaovao,
FP mampiditra fanafody ho toy ny kojakoja fanampiny,
Famaritana ny sehatrasa
Ny sehatrasa fikarohana ara-pahasalamana napariahana eran’i Eoropa dia ahafahantsika mampifanaraka – manoloana ireo fanovana ny fitsipipehezana – mba afahana manantanteraka fanadihadiana klinika any amin’ny firenena rehetra anatin’ny Vondrona Eoropeana na inona na inona ny endrik’izay safidy:
Fikarohana iraisana: RIPH1 na RIPH2
Fikarohana tsy miditra an-tsehatra :
PMS sy PMCF
Bokintsoratra Eoropeana “Fiarovana” sy fahombiazana
Niatrika olana nandritra ny taon amaro ny eoropeanina, olana amin’ny fitadiavana ny marary (marary vitsy sy lafo). Ny fahafantaranay tsara any Georgie dia nanome anay fahafahana hanao fikarohana klinika avo lenta (sokajy RIPH 1, 2 & 3) ho fanohanana ireo dokotera mpikatroka anglophone nianatra tao Eoropa.